CopyQ 4.1.0: အဆင့်မြင့်ကလစ်ဘုတ်မန်နေဂျာတွင်ဘာအသစ်လဲ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 21/08/2021 06:00 | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်လောက်ကငါတို့တစ်ခုလေ့လာခဲ့တယ် အေးမြပြီးအသုံးဝင်သောကိရိယာ ခေါ်ဆိုခ "CopyQ" သူ၌ရှိ၏ 3.5.0 ဗားရှင်းဒီနေ့ငါတို့အဲဒါကိုစူးစမ်းမယ် အသစ်က သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ငါတို့ကိုယူလာပေးတယ် လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 4.1.0.
မသိတဲ့သူတွေအတွက်ပါ "CopyQ"၊ ဒါကတစ်ခု multiplatform လျှောက်လွှာ ကအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် အဆင့်မြင့် clipboard မန်နေဂျာ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်စာရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဘာသာရပ်သို့အပြည့်အ ၀ မ ၀ င်မီ၊ ဤအမျိုးအစား၏ကိရိယာများကိုစိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက်ဆိုလိုသည်။ အဆင့်မြင့် clipboard မန်နေဂျာများဒါပေမယ့် terminal များ (console များ) ကျွန်ုပ်တို့၏စူးစမ်းလေ့လာမှုကိုအကြံပြုလိမ့်မည် ယခင်ဝင်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်အတူ ဤအရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို link အောက်တွင်ချက်ချင်းထားခဲ့မည်။
"Xclip ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား clipboard ပေါ်ရှိစာသားများရိုက်ထည့်ပြီး command line မှစာများကိုပြန်ရယူရန်ခွင့်ပြုထားသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ရယူထားသောစာသားကိုအခြားမည်သည့်အပလီကေးရှင်းမှမထည့်သွင်းနိုင်ပေ။ ထို့အတူ xclip မှတဆင့် clipboard ထဲသို့ထည့်ထားသောစာသားကိုအခြားမည်သည့် application မဆိုသုံးနိုင်သည်။ Xclip: commandboard မှ clipboard ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း" Xclip: command line မှ clipboard ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း
xclip - command line မှ clipboard အားစီမံခန့်ခွဲခြင်း
1 CopyQ: လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အတူဗားရှင်းအသစ်
1.1 CopyQ ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 လက်ရှိဗားရှင်း ၄.၁.၀ တွင်ဘာတွေထူးခြားသနည်း
"ORသမိုင်း၊ ရှာဖွေမှုနှင့်တည်းဖြတ်မှု၊ စာသားများ၊ HTML၊ ပုံများနှင့်အခြားစိတ်ကြိုက်ပုံစံများအတွက်ပံ့ပိုးပေးသောအဆင့်မြင့် cross-platform နှင့် open source clipboard manager CopyQ သည်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်စာရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်။ system clipboard ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအကြောင်းအရာများကိုစိတ်ကြိုက်လမ်းညွှန်ချက်များတွင်သိမ်းပါ။ သိမ်းဆည်းထားသော clipboard ကိုမည်သည့် application တွင်မဆိုတိုက်ရိုက်ကူးယူပြီးကူးနိုင်ပါသည်။"
CopyQ - အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ clipboard မန်နေဂျာ
La 4. CopyQ ၏ X series ၎င်း၏များစွာတို့တွင်ပါဝင်သည် လက်ရှိအခြေခံအင်္ဂါရပ်များ အောက်ပါ ၁၀
၎င်းသည် Linux, Windows နှင့် OS X 10.9 နှင့်အထက်အတွက် cross-platform အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။
စာသား၊ HTML၊ ပုံများ (သို့) အခြားမည်သည့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံကိုမဆိုသိမ်းဆည်းပါ။
၎င်းသည်၎င်း၏ interface တွင်အရာများကိုစီရန်၊ ဖန်တီးရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်၊ ဖျက်ရန်၊ မိတ္တူကူးရန်နှင့်ကူးရန်ခွင့်ပြုသည်။
စီမံထားသောပစ္စည်းများသို့မှတ်စုများ (သို့) တဂ်များထည့်ရန်စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
၎င်းတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောအမိန့်များပါ ၀ င်သောစနစ်ဖြတ်လမ်းများရှိသည်။
ဖြတ်လမ်းများ (သို့) ဗန်း (သို့) ပင်မပြတင်းပေါက်မှအရာများကိုလွယ်ကူစွာကူးရန်။
၎င်းတွင်အပြည့်အ ၀ စိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်သောပုံစံရှိသည်။
၎င်းတွင်အဆင့်မြင့် command line interface နှင့် script များရှိသည်။
ရိုးရှင်းသော Vim ကဲ့သို့အယ်ဒီတာနှင့်ဖြတ်လမ်းလင့်ခ်များအတွက်ပံ့ပိုးပါ။
လက်ရှိဗားရှင်း ၄.၁.၀ တွင်ဘာတွေထူးခြားသနည်း
နေစဉ်၊ လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း အောက်မှာ အရေအတွက်အား 4.1.0 ရက်စွဲ 23 / 04 / 2021 အောက်ပါအချက် ၁၀ ချက်သည် feature အသစ်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။
အကြောင်းကြားချက်စနစ်ဟောင်းကိုယခုမူလ / စနစ်အသိပေးချက်များအစားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကို ဦး စားပေးမှုများရှိအကြောင်းကြားချက်များကိုတဘ်တွင်ပိတ်ထားနိုင်သည်။
scripts များတွင် console object ကို logging လုပ်ရန်၊ ကုန်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်အခြေအနေများအတည်ပြုရန်သုံးနိုင်သည်။
command complete menu တွင်ပိုမိုပြည့်စုံသောအရာများ / လုပ်ဆောင်ချက်အရာဝတ္ထု / script လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖော်ပြချက်များပါ ၀ င်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်ဒိုင်ယာလော့ဂ်နှင့်အမိန့်များသည်ယခု%2ကို%9အတွက်အစားထိုးမပေးပါ။ ၎င်းသည်% 20 သို့မဟုတ်% 3A ကဲ့သို့စာဝှက်ထားသောအက္ခရာများကိုလွတ်ရန်မလိုဘဲ URL များကိုဖြတ်သွားခွင့်ပြုသည်။
command editor တွင် hexadecimal နှင့် boolean တန်ဖိုးများအတွက်မီးမောင်းထိုးပြထားသော syntax
Windows တွင် Native notification များကို Windows7တွင်ပိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မထောက်ပံ့သောအင်္ဂါရပ်များကြောင့်ပျက်ကျခြင်းကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ အပြင်အဆင်အချို့ကိုတင်သောအခါပျက်ကျမှုကိုပြုပြင်သည်။
Wayland အတွက်၊ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုအတွက်နောက်ဆုံးသိမ်းဆည်းထားသောဂျီ omet မေတြီကိုပြန်လည်ရယူသည် (လက်ရှိမျက်နှာပြင်ကိုအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်)
MinGW Windows တည်ဆောက်မှုများထပ်မံရရှိနိုင်ပါသည်။ (native notification အထောက်အပံ့မရှိပါ) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်မှုမှတဆင့် command ကိုအမိန့် နောက်၊ ဒါကငါတို့ဘယ်လိုကြည့်လဲ "CopyQ" ငါတို့ပြေးနေတယ် GNU / Linux Distro:
မှတ်ချက်- အခြားတပ်ဆင်နည်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာပါ link ကို.
အသုံးပြုနည်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် "CopyQ"၎င်း၏ graphical interface မှလည်းကောင်း၊ command line မှလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် entry ကိုသွားကြည့်ရန်သတိရပါ "CopyQ" ဒါမှမဟုတ်အောက်ပါ link တွေကိုလေ့လာပါ။
"၎င်းသည် clipboard ဖြစ်သဖြင့်လျှောက်ထားပြီးသော application သည်ကျွန်ုပ်တို့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုတည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ကိုလှန်လှောကြည့်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းစတင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။" CopyQ - အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ clipboard မန်နေဂျာ
အချုပ်အားဖြင့်မြင်ပြီ "CopyQ" သင့်ကိုပံ့ပိုးပေးမည့်အသုံးဝင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် GNU / Linux Distro una အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာပုံမှန်အားဖြင့်အားလုံးသုံးလေ့ရှိသောပုံမှန် application ကိုအသုံးမပြုချင်ပါ Distro ပါ y Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » CopyQ 4.1.0: အဆင့်မြင့်ကလစ်ဘုတ်မန်နေဂျာမှာဘာအသစ်လဲ